Matanho Ekuchengetedza muWheelchair Emagetsi
Kwemakore mashoma ikozvino, standard manual mavhiripu vakapa kufamba uye kunyaradza vakawandisa remara uye vakaremara vanhu. Manual mavhiripu zvinoda simba repamusoro pemuviri kunyanya mumaoko kuti zvifambe. Vanhu vane miviri yekumusoro isina kusimba havazowani rusununguko uye kuzvimirira a wiricheya yemawoko Inopa.
wiricheya yemawoko Use zvinoda imwe yerudzi rwekubatsira kana ivo vachifanira kukwira kwakadzika mawere. Tekinoroji yazvino yatipa zvirinani kufamba zvishandiso zvakaita semagetsi wiricheya, iyo inopa kuwedzera kuzvivimba uye kuzvimiririra kune avo venyama remara.
Automatic Propelling mavhiripu
Battery powered magetsi mavhiripu hazvidi simba rakawanda remuviri kubva kumushandisi. Kufamba uchikwira ma inclines kuri nyore musimba wiricheya zvichienzaniswa nebhuku rekushandisa. Kuti zvive nyore kushanda kwemaoko, magetsi mavhiripu kazhinji iine imwe mhando yekudzora inogara mune imwe yemaoko.
Kunze kwevakuru remara uye vakaremara, vamwe vanhu vanogona kukubatsira iwe nekushandisa kwemagetsi wiricheya inosanganisira vakapona sitiroko uye vanhu vane zvirwere zvine kupera kwevhiki kumagumo. Izvo zvakakosha kuti udzidze emacheya emagetsi 'ekuchengetedza maficha pamberi chaipo kushandisa izvozvo.
Kuchengetedza kana Kunze
Kungofanana nezvaungaita mumotokari, zvakakosha kuti uchengetedze bhandi rekuchengetedza kana uchinge uchishandura magetsi wiricheya kuitira kudzivirira njodzi. Usati wadzika pasi nemagetsi wiricheya, ita shuwa kuti pane curb kana driveway yekudzivirira kuwira kumashure, izvo zvinogona kukuvadza musana. Gara uine chokwadi chekuti iyo wiricheya yasvika pa yose mira usati waedza kubuda.
Kana zvichibvira zvinokurudzirwa kushandisa magetsi wiricheya mumigwagwa isina ruzha asi yakazara vanhu, kana ukasangana nezvinetso nemagetsi wiricheya. Vashandisi vanofanirwa kugara vachichenjerera pavanoshandisa magetsi avo wiricheya sezvo isiri mota yekumhanya.
Izvo hazvina basa nemhando ye wiricheya uri kushandisa mumugwagwa, kuchengeteka kunogara kuri kwekutanga. Ivo vakagadzirwa kuti vape kufamba kwete kungonakidzwa kwekusava nehanya kunogona kutungamira kune zvakakomba kuipa.